Mid ka mid ah dhibcaha ugu fiican filimka ee muddooyinkii dhowaa | Abuurista khadka tooska ah
Ma ogi inaad filimka aragtay iyo in kale «I qabso haddii aad awoodid (2002)» waxaa qoray Steven Spielberg laakiin hadaadan arag, waan kugula talinayaa. Waa filim aad u wanaagsan oo ku saleysan dhacdooyinka dhabta ah waxaana jilaya labo jilaa oo waaweyn sida Leonardo DiCaprio iyo Tom Hanks.
Laakiin halkan uma joogo inaan wax kaaga sheego filimka laakiin waxa ku saabsan buundooyinkiisa. Aniga ahaan, iyagu waa mid kamid ah dhibcaha ugu fiican filimka, kaliya maahan muuqaal laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay sharaxayaan waxa filimku ku saabsan yahay, sheeko ayey sheegaan.
Taxanahan cinwaannada dejisaa xilliga, qaabka, iyo codka sheekada filimka adeegsiga sawir gacmeedyada 'retro graphic' ilaa laxanka jazz oo uu sameeyay halyeeygii John Williams kaas oo siinaya baashaal iyo hawo hawo isku mar ah.
Dhibcooyinkan waxaa naqshadeeyay lamaane Faransiis ah, Olivier Kuntzel iyo Florence Deygas, taas waxaa ku dhiirrigeliyay taxanaha cinwaanka ee Saul Bass sameeyay. Sida laga soo xigtay qirashadiisa, waxa lamaanahan faransiiska ah ay doonayeen, ayaa ahaa in lagu daro naqshad gacanta de Saul Bass, khadkiisa iyo qaababkiisa, adoo adeegsanaya warbaahinta hada jirta iyo tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay casri ah.
Kuwa aan garanayn, Saul Bass wuxuu ahaa naqshadeeye caan ah oo xagga sawirada ah, oo ku caanbaxay shaqadiisa xagga filimada iyo nashqadeynta qaar ka mid ah aqoonsiyada shirkadaha Mareykanka ugu muhiimsan.
Sida laga soo xigtay naqshadeeye Kuntzel, waxay ahayd isla Spielberg oo ka codsaday dhibcaha inuu yeesho muuqaalka 60-ka “Waqtigaas cinwaanadu marwalba waxay ahaayeen animations muuqaal ah. Spielberg wuxuu rabay taxanaha si uu u dhigo daawadaha mudadaas isla markaasna uu ugu bandhigo sheekada ”.
Waqtigan xaadirka ah, labadan farshaxan ee abuuray dhibcahaan waxay leeyihiin istuudiyaha la yiraahdo Kuntzel + Deygas oo loogu talagalay naqshadeynta qalabka guryaha, sawir, moodel iyo animation.
Waxaan halkan ku soo koobaynaa wax yar oo ku saabsan taariikh nololeedka labadan farshaxan:
Dhinaca bidix Olivier Kuntzel iyo dhanka midig ee Florence Deygas
3 Daraasada Kuntzel + Deygas
Olivier kuntzel waa naqshadeeye iyo sawirqaade fadhigeeduna yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ma yahay Degree Isgaarsiinta Muuqaalka Farshaxanka Qurxinta Olivier de Serre. Sannadkii 1988, ayaa lagu aqoonsaday shaqadiisa "Tapis dans l'ombre".
1990 wuxuu sameeyay Kuntzel + Deygas, iyo Florence Deygas, wuxuuna sii waday inuu abuuro dhibcaha furitaanka ee Steven Spielberg ee "Qabsashada Haddii Aad Tahay" (2002), cinwaanada kale ee isku xigxiga ee The Pink Panther (2006), iyo cinwaanada ugu waaweyn Waxaa qoray Le Petit Nicolas (2009). Wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey ololeyaasha xayeysiinta ee American Express, Guerlain iyo Renault.
Wuxuu ku soo bandhigay Ici Paris Beaubourg, Joyce Gallery, Spree Gallery, MOMA 1990, iyo Grand Palais 2006, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta D&AD 2004.
Florence Deygas waa naqshadeeye iyo sawirqaade fadhigeeduna yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Wuxuu ka qalin jabiyay filim animated ah Iskuulka Gobelins ee ku yaal magaalada Florence. Wuxuu ku soo galay berrinka sawir gacmeedka guul weyn wuxuuna xubin ka noqday iskuulka "xarrago qurxoon". Waxay iskaashi la sameysay Big, Japanese Vogue, Colette, Yves Saint-Laurent caraf udgoon, iyo Bourjois intii u dhaxeysay 1998 ilaa 2001. Waxay ka mid aheyd show kooxeedka "Traits Très Mode" waxayna leedahay aqoonsiyo dhowr ah xaga moodada iyo taariikhda buugaagta moodada
Sannadkii 1990, oo ay weheliyaan Olivier Kuntzel, wuxuu sameeyay Kuntzel + Deygas wuxuuna sii waday abuurista dhibcaha furitaanka ee Steven Spielberg, "Qabsashada Haddii Aad Tahay" (2002), cinwaanka cinwaanka kale ee The Pink Panther (2006), iyo cinwaanno Le Petit Nicolas (2009). Wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey ololeyaasha xayeysiinta ee American Express, Guerlain iyo Renault.
Sida Olivier Kuntzel, wuxuu kusoo bandhigay Ici Paris Beaubourg, Joyce Gallery, Spree Gallery, MOMA 1990, iyo Grand Palais 2006, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta D&AD 2004.
Daraasada Kuntzel + Deygas
Daraasaddan oo ka soo baxday midowga xirfadeed ee Olivier kuntzel y Florence deygas. Wuxuu diiradda saarayaa shaqada gudaha abuurka dabeecadda sida quruxda iyo bahallada qaababka kala duwan leh, xayawaanada, jilayaasha kartoonada ah ee adduunka burburin kara, laambad nool iyo kuwa ku hadla. Wax kasta oo ka yimaada maskaxdaada. Waxyaabahaan hal abuurka ah waxay lakulmaan naqshad, moodel, iyo waliba filim.
Wuxuu u qabtay mashaariic: Ahkah, American Express, Azzaro Couture, Baccarat, Colette, Diptyque, Goyard, Guerlain, Isetan Tokyo, Jaeger-Lecoultre, Joyce Hong Kong iyo Paris, Le Bon Marché, Mitsukoshi Tokyo, Nokia, Veuve Clicquot, Vogue Nippon ... iyo shineemo: Agathe Cléry, I qabta hadaad awoodo, Le petit Nicolas, In Otto, Pink Panther ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Mid ka mid ah dhibcaha filimka ugu wanaagsan xilliyadii ugu dambeeyay